17 Jul 2019 . 11:18 AM
ပစ္စည်းမ၀ယ်ခင် စဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ ပြောရင် လက်ခံကြမှာလား။ ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ဖို့အရေး ဈေးကြီးပြီး ၀န်များတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ သေးသေးလေးကအစ လိုက်ပြီး စဉ်းစားကြဖို့ တိုက်တွန်းရင် လက်မခံချင်ကြဘူးမှန်းတော့ သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ခံရပါမယ်။ မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီးတော့ လက်ခံခိုင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ လက်ခံသင့်တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေ ပြောပြပေးမှာပါ။ ဒီအကြောင်းပြချက်တွေကို နားထောင်ပြီးတော့မှ လိုက်လုပ်သင့်၊ မလုပ်သင့် ချင့်ချိန်ကြပေါ့နော်။
လိုအပ်လား၊ မလိုအပ်ဘူးလား ??
ပထမဆုံး ဘာကိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့ ကြော်ငြာကောင်းတိုင်း၊ လူတကာသုံးတိုင်း လိုက်ဝယ်ဖို့ မလိုအပ်ဘဲ ကိုယ့်အတွက် တကယ် လိုအပ်လား၊ မလိုအပ်လားအပေါ်မူတည်ပြီး စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့ပါပဲ။ ကိုယ်က အရမ်းလိုချင်နေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဟာ တစ်ခါတလေ ကိုယ့်အတွက် တကယ်မလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲဒီ့အခါ အချိန်ကြာကြာလည်း မသုံးဖြစ်ဘဲ ခဏလေးနဲ့ ဘေးရောက်သွားတော့တာပါပဲ။ ဈေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေဆို ပိုလို့တောင် စဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာဆိုရင် ကိုယ့်မှာ အမြဲလိမ်းနေကျ အကြိုက်တွေ့တဲ့ Foundation ရှိနေလျှက်သားနဲ့ နာမည်ကြီး Foundation တစ်ခုကို မလိုအပ်ဘဲ ထပ်ဝယ်မိမယ်ဆိုရင် ဟိုဟာလည်း မကုန်၊ ဒီဟာလည်း ကျန်နဲ့ အလဟသတ်ဖြစ်ကုန်တော့မှာပါ။
အသုံးဝင်လား၊ အသုံးမ၀င်ဘူးလား ??
တစ်ခါတလေ လိုအပ်သလိုလိုတော့ ရှိသား။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းဝယ်သုံးကြည့်တော့ အသုံးမ၀င်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါမျိုးပြဿနာတွေ ခဏခဏဖြစ်ပါတယ်နော်။ လိုအပ်တယ်၊ လိုချင်တယ်ဆိုပေမယ့် အသုံးမ၀င်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်နေရင်တော့ ငွေကုန်တာပဲ အဖတ်တင်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ ကိုယ့်အတွက် မရှိလို့ လိုအပ်နေတယ်ဆိုပြီး ခရီးဆောင်အိတ်ကောင်းကောင်းတစ်အိတ်ဝယ်လိုက်မိပေမယ့် အမြဲတမ်းခရီးထွက်နေတတ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်တော့ လိုအပ်ပေမယ့်လည်း ရံဖန်ရံခါမှပဲ အသုံးပြုဖြစ်တော့ ထင်သလောက် အသုံးမ၀င်ဘူးပေါ့။ ဒီလိုပစ္စည်းမျိုးတွေဆိုရင်တော့ ၀ယ်လိုက်ပါ။ ဒါပေမယ့် သက်သာပြီး တာရှည်ခံမယ့်ပစ္စည်းကိုပဲ ရွေးချယ်ပါ။
လိုချင်လား၊ မလိုချင်ဘူးလား ??
သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ Shopping ထွက်တဲ့အခါ အများဆုံးဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ဒုက္ခပါပဲ။ လိုအပ်တာတွေ၊ အသုံးဝင်တာတွေ မတွေးပါနဲ့ဦး။ ဈေးကြီးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မကြိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီ့ပစ္စည်းတစ်ခုကို မ၀ယ်ချင်ပေမယ့် အားလုံးက တစ်ယောက်တစ်ခုဝယ်ကြတော့ လူတန်းစေ့အောင် အားနာနာနဲ့ ၀ယ်လိုက်ရတာမျိုးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်မလိုချင်တော့ ချောင်ထိုးထားမိကြပြန်ရော။ ဥပမာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မုန့်သွားစားရင်း အားလုံး ပါဆယ်ယူကြတဲ့မုန့်တစ်ခုခုကို ကိုယ်လည်း မကောင်းတတ်လို့ ပါဆယ်ဆွဲလာရပြီးမှ မစားချင်လို့ အိမ်မှာပစ်ထားလိုက်ပေါင်းများပါပြီ။
သင့်တော်လား၊ မသင့်တော်ဘူးလား ??
လူတိုင်းဟာ အကောင်းဆုံးတွေကိုချည်း လိုချင်ကြတာပါပဲ။ ကိုယ်လည်း လိုချင်တယ်။ ရှင်တို့လည်း လိုချင်ကြမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ၀င်ငွေ၊ လုပ်ငန်းခွင်၊ မိသားစုအခြေအနေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားရပါတော့မယ်။ ဥပမာဆိုရင် နောက်ဆုံးပေါ် iPhone တစ်လုံးဆိုရင် ကိုင်ချင်ကြတဲ့သူတွေချည်းပါပဲ။ မလိုချင်တဲ့လူမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ ၀င်ငွေက သာမန် ၀န်ထမ်းတစ်ဦးဆိုရင်တော့ တစ်နှစ်လောက် အကြွေးတင်ခံပြီး အဲဒီ့ iPhone ကို ၀ယ်ကိုင်လိုက်ဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး။
ဒီလေးချက်ဟာ ဈေးဝယ်ဖို့စဉ်းစားတိုင်း ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကနေစလို့ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေအထိ အလေအလွင့်မဖြစ်ရလေအောင် စဉ်းစားရွေးချယ်သင့်တဲ့ အကြောင်းပြချက်လေးချက်ပါ။ ဒီအချက်တွေထဲက အနည်းဆုံး (၃)ချက်လောက်နဲ့ ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင်တော့ ပျော်ပျော်ကြီး ၀ယ်လိုက်လို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ငွေကို အလကားသုံးနေပြီး အမျှော်အမြင်မရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်နော်။